» करिब २ गुणाले ओभरसब्सक्राइब भयो प्रभु सेलेक्ट फण्ड
करिब २ गुणाले ओभरसब्सक्राइब भयो प्रभु सेलेक्ट फण्ड
२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार २०:२५
काठमाडौं । जेष्ठ ५ गतेबाट सार्वजनिक निष्काशन भएको प्रभु सेलेक्ट फण्डको निष्कासन आज आइतबार जेष्ठ ९ गतेबाट बन्द भएको छ । आवेदन दिने चौथो तथा अन्तिम दिन पाँच बजे सम्म यो फण्ड करिब २ गुणाले ओभर सब्सक्राइब भएको छ ।
१० करोड इकाईको माग गरिएकोमा चौथो तथा अन्तिम दिन अपरान्ह ५ बजेसम्म १९ करोड ७८ लाख ५८ हजार २ सय ८० इकाईका लागि आवेदन परेको छ । ८५ हजार ५ सय ५४ जना सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुबाट १ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख ८२ हजार ८ सय रकम बराबरको १८ करोड २८ लाख ५८ हजार २ सय ८० इकाई खरिदका लागि आवेदन परेको हो । प्रभु क्यापिटलले जेष्ठ ५ गतेदेखि प्रति इकाई रु. १० अंकित दरमा १ अर्ब बराबरको १० करोड इकाई म्युचुअल फण्ड बिक्रीमा ल्याएको हो ।
यो फण्डले १५ प्रतिशत इकाईमध्ये कोष प्रबद्र्धक प्रभु बैंक लिमिटेडलाई रु. १४ करोड लगानी वापत १ करोड ४० लाख इकाई र कोष व्यवस्थापक प्रभु क्यापिटललाई रु. १ करोड लगानी वापत १० लाख इकाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरिएको थियो ।